Indlu yaseFama yaseShanas
Ifama sinombuki zindwendwe onguRaid
Indlu entle entsha yefama, enechibi labucala emnyango, amagumbi okulala ama-3, amagumbi okuseta ama-2 kunye negadi entle. indawo ilungele ukuhlanganisana kosapho kunye nohambo lwamaqela. kukho indawo eluhlaza efanelekileyo yebhola, ibhola yentlambo kunye neminye imisebenzi yeqela. Indawo ifanelekile kwibarbeque kwaye i-grill iyafumaneka. Ikwalungile kubumfihlo ngokukodwa kwiqela labasetyhini abafuna indawo egqunyiweyo yangaphandle yemisebenzi kunye nephuli yangaphakathi.
indlu yasefama ilungele ngokugqibeleleyo usuku kunye nabahlobo be-barbeque okanye imisebenzi yangaphandle. inendawo enkulu eluhlaza elungele imisebenzi yangaphandle kunye nendawo yokuhlala entle ngaphakathi nangaphandle. inobungakanani obuhle bequla langaphakathi kunye negadi egqunyiweyo.
Indlu yasefama ikufutshane kakhulu kwindlela enkulu inika ukufikelela ngokulula. ifama ikwindawo yokuhlala kwaye kukho iivenkile ezininzi kunye neendawo zokutyela ezikufutshane kunye neendlela zokuhanjiswa kwazo.
Umbuki zindwendwe ngu- Raid
Undwendwe lunokuqhagamshelana ngefowuni, i-imeyile okanye isicatshulwa.